२०३० मा नेपाल कस्तो होला ? • WhyNepal.com
June 28, 2012 change, nepali, thought provokingUjwal
प्रायले मलाई सोध्छन् – भन न उज्वल, भविष्यको नेपाल कस्तो होला हँ ? कसरी बदलिन्छ होला?
प्राय ठोडो उत्तर दिन्छु, “कहाँ बाट थाहा हुनु नि मलाई?” नत्र केवल हल्का मुस्कान दिदैँ भन्छु “ठिकै हुन्छ नि – राम्रै”। तर मन भित्र चाहिँ सोची रहन्छु नेपाल भविष्यमा कता जान्छ होला भनेर। आज त्यहि मनभित्रका सोचलाई ३० वटा भविष्यवाणीको रुपमा प्रस्तुत गरेको छु। ल पढौँ नेपालको स्वरुप सन २०३० मा।
अहिलेका यी सबै भातमारा असक्षम नेताहरु जसलाई तपाँई तिव्र घृणा गर्नुहुन्छ वा थुक्नु हुन्छ – तिनीहरू बिलाउनेछन्। बरु हांमी मध्यबाटै सच्चा, लगनशील र अहिले सम्म कुनै राजनितिक पार्टीसँग आबद्द नभएकै नेतृत्वहरु हाबि हुने छन् त्यस बेला।
त्यति बेलाको नेपालको सर्वश्रेष्ट १० व्यवसायहरु अहिले शुरु नै नभाकोहरु नै हुनेछन् ।
काठमाडौँ छिर्नेहरु भन्दा छोड्नेहरु धेरै हुनेछन्।
नेपालमा आउने धेरै जसो पर्यटक धार्मिक कारणले नै आउँछन्।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो निर्यात पानी हुनेछ। अन्तराष्ट्रिय शेएर बजारमा नेपालको पानी कुनै न कुनै रुपमा व्यापार हुनेछ।( अहिले तेलको भए जस्तै)।
नेपाल पुलिसले पुरै बर्ष भरि ८५० भन्दा कम गोली चलाउने छ।
४ मा १ नेपालीको दोहोरो नागरिकता हुनेछ।
नेपाल आई-सि-सि विश्‍व कप क्रिकेट को आयोजक बन्नेछ। यस बेला नेपालले नै जित्छ भन्ने मेरो विश्वास छ।
पहाडी भेगका जग्गाको भाऊ तराई र उपत्यका भन्दा बढि हुनेछ।
नेपाल, भारत र चीन बीच आवत-जावत गर्न भिसा चाहिँदैन। ( आहिले इयूरोपमा जस्तै )
नेपाल, भारत, चीन र अरु केहि छिमेकी देशहरू सबैले एउटै मुद्रा प्रयोग गर्नेछन। चलनचल्तीमा रहने नोटहरु मध्ये कुनै एउटा नोटमा बुद्धको तस्विर राखिने छ।
अन्तर-राष्ट्रिय विवाह जताततै हुनेछ नेपालीहरुमा। बरु आफ्‍नै जात भित्र बाबु-आमाले जुराएर बिहा-बारी चाहिँ अत्यन्त न्युन हुनेछ। अझ, नेपालीहरुले पश्‍चिमी मुलूकका भन्दा पनि बढि चाइनिजहरु संग वैवाहिक सम्बन्ध गाँस्नेछन्, त्यस बखत।
धारवाहिक टेली श्रृंखलाहरुको सट्टा हामी नेपालीले अनलाईन सामाजिक कम्पुटर खेलहरुबाटै मनोरञ्जन लिनेछौँ । कसैले पनि टेलिभिजन “हेर्ने“ छैनन् त्यस बेला।
नेपालको सामाजिक संस्कृतिको बारेमा निर्णयाक भुमिका खेल्नेमा एउटा समलिङ्गी पनि हुनेछन्।
“वीरचक्र” भन्ने जिम्मेवारी, भातृत्व र नैतिकतामा आधारित शिद्दान्त जुन हिन्दु -बौद्ध धर्मबाट उब्जिएको हुन्छ – यसलाई केहि प्रभावशाली नेपाली र विदेशीको जमातले अँगाल्नेछन् र देश-बिदेशमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नमा टेवा पुर्‍याउँनेछन्।
प्रमुख समाचारमा कवि, कलाकार र ब्लगर(लेखक)जस्ताको चर्चा बढी हुनेछ।
सबै नेपालीहरु २४ सै घण्टा ईन्टरनेटमा रहनेछन्, आई-फोन मोबाईल फोन भन्दा १०० गुना बढि शक्तिशाली आधुनिक उपकरण बोकेर (सिधै आँखाको नानीमा लाउन मिल्ने)। यसको ब्याट्री कहिलेपनि सकिँदैन।
कान्तिपुर, नागरिक, हिमाल र हिमालयन टाईम्स जस्ता पत्र पत्रिकाहरुको सट्टा सिधै तपाईँले आफूले सम्मान गर्ने वा मन पर्ने व्यक्तित्वहरुको प्रस्तुति वा समाचार पाँउनुहुनेछ उनीहरुबाटै र यो २४ घण्टा ७ दिनै तपाईँले पढ्न, हेर्न पाउनुहुनेछ कहिले नछुट्नेगरि।
नेपालमा वयस्कहरुको लागि भनेर खोलेका चलचित्र व्यवसाय फस्टाउनेछन्।
नेपाली नागरिकता नेपालमा जन्मेको आधारमा मात्र नभई योग्यताको आधारमा पनि पाईनेछ।
नेपालले अनुदानको भिक माग्‍नु भन्दा बढि अरु राष्ट्रलाई सहयोग गर्न थाल्नेछ विशेषगरी “पानी” अनुदान दिएर।
नेपाल हिमालले भन्दा त यहाँ पानी संकलन गर्न बनाइएका हजारौँ मनोरम मानव तालले प्रख्यात हुनेछ।
महिला अधिकारको बिषयमा कुनै विवाद नै रहने छैन। बरु विवाद ईन्टरनेटबाट बाहिरिएर बस्न पाउने हक-अधिकारको लागी वा अन्य जीव-जन्तीका अधिकारको लागी हुनेछ।
एउटा सानो “आफूलाई शुद्ध नेपाली” ठान्ने विदेशी बिरोधी समुहले मिश्रित नेपाली र नेपालमा बसेका बिदेशी बिरुद्ध आक्रमक “शुद्धिकरण” अभियान सुरू गर्न प्रयास गर्नेछन्।
इतिँहासले २००२-२०१२ को दशकलाई “हराएको दशक”, २०१३-२०२२ को दशक लाई “उफ्रेको दशक” र २०२३-२०३२ को दशकलाई “ उज्यालो दशक” भनी ठम्याउनेछ।
धनी अझ धनी हुनेछन, गरिब पनि धनी हुदैँ जानेछन् । तर उनीहरु बिचको दुरी कायम नै रहनेछ।
जहिले काम मात्रै गरिरहने नेपालीको बानीले पारिवारिक जीवन बिगार्ने डरले यो सुध्रोस् भनेर नेपाल सरकारले कहिले काँहि आफैले नेपाल “बन्द” (घर बस अभियान) को घोषणा गर्नेछ।
नेपालका प्राय: घरहरु सौर्य उर्जाले संचालित हुनेछन।
नेपालको जनसंख्या घटने छ। (मर्ने भन्दा जन्मने कम हुनाले)
२०३० मा नेपालीहरुले मलाई “नयाँ नोस्ट्राडामस (कथित भविश्यवाणीकर्ता)” भनेर घोषित गर्नेछन् तर म यो तुलनालाई सरासर अस्विकार गर्नेछु 🙂
तपाँईलाई यी मध्य कुन चाहिँ एकदमै मन प‍र्‍यो त?
तपाँईको २०३० मा नेपालको भविष्यवाणी तल थप्दै जाँदा कसो होला ! हेरौं तपाईको पनि सोचहरु अब त नप्याउदोँ सोचहरु पनि सोच्ने बेला भइसकेको छ। कि कसो ?
← Why doesn’t anyone openapolitical party in Nepal?5responsible young Nepalis to look out for →